Isdhaxgalka Falanqaynta OpinionLab iyo Tijaabada | Martech Zone
Arbacada, Maarso 31, 2010 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
FikraddaLab waa goob loogu talagalay in lagu soo qabto macluumaadka macaamiisha iyada oo loo marayo sahan iyo jawaab celinta boggaaga. OpinionLab waxay ugu yeertaa Macluumaadka Voice-Of-Customer (VOC). OpinionLab hadda wey balaarineysaa aaladda ay ku shaqeyneyso si loogu daro labadaba isdhexgalka falanqaynta iyo tijaabinta. Tani waa mid aad waxtar u leh in la isku waafajiyo jawaab celinta martidaada iyo howlaha bogaggooda.
Qiimaha lagu helayo macmiil cusub lix illaa toddobo jeer oo ah in la haysto mid hadda jira, ayaa lagama maarmaan u ah noocyada in la habeeyo talooyinka macaamiisha ku hawlan weligood ka weyneyn ,? ayuu yidhi Rand Nickerson, oo ah madaxa shirkadda OpinionLab. Inta Webka Analytics bixiyaan aragti muhiim ah oo ku saabsan waxa booqdayaashu ku sameeyaan internetka, socodka xogta VOC waxay muujineysaa sababta adeegsadayaashu ugu dhaqmaan sida ay u dhaqmaan. Iyadoo la ballaarinayo aaladaha is-dhexgalka ee la xaqiijiyay oo ay ku jiraan noocyo kala duwan iyo barnaamijyada A / B ee tijaabada ah sida 'Omniture Test & Target', magacyadu hadda waxay lakulmi karaan aragtida macaamiisha ee gaarka u ah bogga. Analytics natiijooyinka baaritaanka. Marka laga reebo in la aqoonsado guulaha ama meelaha dhibaatooyinka ka jira si hufan, shirkadaha ayaa awood u leh inay ka faa'iideystaan ​​barashada muhiimka ah guud ahaan Websaydhkooda ama ururkooda, iyagoo si ballaadhan u kordhinaya ROI ee imtixaan kasta oo la sameeyo.
Tusaale ahaan, haddii Analytics xogta ayaa muujineysa kor u kac lama filaan ah oo ku saabsan heerka boodboodka bogga, waxaad dhexgalin kartaa warbixinnada macaamiisha-faallooyinka si aad u barato sababta ay dadku u baxayaan. Ama, haddii aad hesho digniin muujineysa in bog badan oo soo booqdayaashu ay sameynayaan faallooyin diidmo ah, waad gujin kartaa hal jeer si aad u aragto isticmaale kasta Analytics xogta ama ciyaarta loo maqli karo.
The Analytics isdhaxgalka ayaa hada lashaqeeya WebTrends, TeaLeaf, Google Analytics, Omniture, CoreMetrics iyo kuwa kale.
Tags: sahaminta macaamiishashaybaarka ra'yigafikradxogta codkacodka macmiilka